Hooyo dib ula midawday wiilkeeda oo laga afduubtay 1987-dii isaga oo yar. – XOGMAAL.COM
Hooyo dib ula midawday wiilkeeda oo laga afduubtay 1987-dii isaga oo yar.
Hooyo reer Canada ah oo dib ula midawday wiilkeeda oo laga afduubtay 1987 Lyneth Mann-Lewis ka hadlaysay wiilkeeda ay dib u midoobeen
By Soomaaliya	 Last updated Oct 30, 2018
Jermaine Allan Mann aabihii ayaa lagu eedeeyay in uu la tagay wiilka yar oo 21 bilood jira, markaas oo ay qorshaynayeen in ay Toronto booqdaan.
Wiilka iyo aabihii ayaa magac aan kuwoodii rasmiga ahaa ahayn ku joogay Maraykanka wixii toddobaadkii hore ka horreeyay, ka dib markii aabaha lagu eedeeyay in uu isticmaalayo dokumanti been abuur ah.
Xiritaankii la xirayna wuxuu dhaliyay in la soo afjaro dadaal ay booliiska labada dal ku baadigoobayeen wiilka yar ee la waayay 31 ka hor.
Jermaine Allan Mann oo hadda 33 jir ah ayaa hooyadii u sheegay in loo sheegay in hooyadii ay dhimatay isaga oo sabi ah, balse Sabtidii iyo Axaddii midkeed ayay hooyadii Lyneth Mann-Lewis u duushay Maraykanka si ay wiilkeeda ula midawdo.
Isniintii ayayna faahfaahin ka bixisay la kulanka wiilkeeda la helay.
“Erayo laguma cabiri karo sida aan dareemay,” ayay tiri, “erayada ah wiilkaagii wuu nool yahay oo waan helnay neecaw ayay ahaayeen.”
Markii u horraysay een arkay wiilkayga waan ku dhagdhagay xataa inta aanan la hadlin, ayay tiri.
“Waxaan doonayay in aan arko in warka la ii sheegay uu run yahay, Alla Illaahayoow, waa wiil kaygii ayaan iri” ayay tiri.
Saacado ayaan sheekaysanay ayay tiri, waxaana xaqiijiyay in cunto aan kariyay uu cuno ka hor inta aanan Canada dib ugu laabanin.
Sidee loo helay Jermaine Allan Mann?
Allan Mann oo 66 jir ah ayaa lagu eedeeyay in uu afduubtay wiilkiisa 24 bishii Juunyo ee sannadkii 1987 markaas oo ay qorshanayeen in ay Canada ku dhex safraan. Isaga iyo xaaskiisa Lyneth sannad ayay markaas kala maqnaayeen.
Booliiska Toronto ayaa billaabay baaritaan ballaaran oo ku saabsan wiilka la waayay, balse kama aysan niib keenin.
Baadigoobka ayaa sii socday, sheekada ku saabsan Jermaine iyo sawirkiisa oo loo qaabeeyay kolba da’da uu marayo ayaana la gayn jiray goobaha carruurta lagu xannaaneeyo, baareyaasha labada dalna baaritaanka kama aysan quusanin.
Sannadkii 2016 ayay mar kale booliiska Canada iyo Maraykanku dib u billaabeen baadi goobka wiilkaas.
26 Oktoobar ayaa Mann lagu xiray Vernon oo Connecticut ka tirsan, taas oo 20km u jirta Hartford oo ah caasimadda gobolka.
Mann oo haysta dhalashada Canada iyo Ghana ayaa lagu eedeeyay in isaga iyo wiilkiisaba uu u sameeyay dhalasho been abuur ah uuna sheegtay in ay ka yimaaddeen Texas.
Dhalashadan ayaa been abuur lagu tilmaamay markii uu Mann u adeegsaday in uu ku kiraysto guri riqiis oo dawladdu ay dadka ka kabto kharashkiisa. Intaas ka dibna waxaa lagu aqoonsaday qalabka combiyuutarrada lagu isticmaalo ee wajiyada dadka aqoonsada.
Wuxuu wajahayaa in uu been u sheegay Maraykanka. Waxaa kale oo uu wajahayaa in loo masaafuriyo Canada isaga oo afduub loo haysto si dacwayniisa xadka koonfureed looga tallaabiyo.
Eedaymaha loo haysto Mann midkoodna maxkamadi ma tijaabinin.
Lyneth waxay sheegtay in iyada iyo Jermaine ay haystaan wakhti ay wixii hore kaga gudbaan oo qoysnimadooda ku sii wataan.
Waxaan makhraati u ahayn in qofina uusan quusanin maadaama oo 31 aan dhibaato soo maray, qof adag noqo, rumayso in wax walba dhici karaan,” ayay tiri.
Ku dhawaad toban ruux ayaa ay ka soo gaartay weerar ka dhacay Tunisia
5,200 askari ayuu Mareykanka u dirayaa xudka Mexico uu la wadaago